နည်းလမ်း ၁၀ မျိုး။ ။ မှန်ကန်သောအစားအယောက်ကိုရွေးချယ်ခြင်း - Hello Sayarwon
နည်းလမ်း ၁၀ မျိုး။ ။ မှန်ကန်သောအစားအယောက်ကိုရွေးချယ်ခြင်း
ကျန်းမာသောဘဝရရန် မှန်ကန်သောအစာကို မှန်ကန်သောအချိုးအစားတိုင်းစားသင့်သည်။ အစားအသောက်မှတစ်ဆင့် ဘယ်လိုကျန်းမာအောင်နေမလဲ။ ဒီဆောင်းပါးက သင်အစားအသောက်ရွေးချယ်ပုံဆယ်မျိုးကိုဖော်ပြလိမ့်မည်။
သင့်အစားအသောက်စားပြီးချိန်တွင် အဆီနည်းသော ၁% သို့မဟုတ် အဆီမပါသောနို့တစ်ခွက်ကိုသောက်နိုင်သည်။ ထိုနို့တွင် ဗီတာမင်များရုံသာမက ပြည့်ဝဆီနှင့် ကယ်လိုရီပမာဏအတွုက်လဲစိတ်ပူစရာမလိုပါ။ သင်ကနို့ကိုမကြိုက်ပါက ဒိန်ချသ် သို့မဟုတ် ပဲနို့ကိုသောက်သုံးနိုင်သည်။
စပါးစေံအပြည့်က ပြုပြင်ထားသောအရာထက်ပိုကျန်းမာသည်။ ထိုကြောင့်စပါးစေ့အပြည့်ကိုစားပါ။ ဥပမာ ပါမှန့်ဖြူ သို့မဟုတ် ထမင်းအဖြူစားခြင်းထက် အညိုရောင်ဆန် သို့မဟုတ် ဂျုံပါမှန့်ကိုစားသင့်သည်။
အောက်ပါအစားများကို ခဏခဏစားခြင်း သိုမဟုတ် အများကြီးစားခြင်းရှောင်ပါ။
အထူးပြုလုပ်ထားသောအစာ သို့မဟုတ် အသင့်စားစရာ (ပီဇာ ဟမ်ဘာဂါ ဝက်သားခြောက် ခရင်ချိစ် အသား ကိတ် ကွတ်ကီး သိကြား အချိုရည်)များက အဆီဓါတ်များခြင်း ဆွဲစေသောအရာများခြင်း သကြားနှင့်ဆားများသည်။ ထိုကြောင့် ထိုအရာများကိုမကြာခဏစားခြင်းက နေ့စဉ် ကယ်လိုရီကိုတက်စေသည်။
စတိုးဆိုင်တစ်ခုသို့သွားပါက တခုခုမဝယ်ခင် သို့မဟုတ် ပြုလုပ်ထားသောအရာကိုမဝယ်ခင် ကယ်လိုရီ ဆိုဒီယမ် နှင့်အဆီပါနှုန်းကိုအရင်ဖတ်ပါ။ ဆိုဒီယမ်နည်းသော သို့မဟုတ် ဆိုဒီယမ်မပါသောအစာများကိုပိုစားသင့်သည်။
အချိုရည် သို့မဟုတ် အရက်အစား ရေကိုသောက်ပါ။
သင်ခန္ဓါကိုယ်ပုံမှန်အလုပ်လုပ်ရန် ရေများစွာလိုအပ်သည်။ သို့သော် ရေကိုသာသောက်သင့်သည်။ ဆိုဒါ အရက် အားဖြည့်အချိုရည် စသည်တို့ကိုမသောက်သုံးသင့်ပါ။ ထိုအရာများတွင် ကယ်လိုရီ အငွေ့နှင့် သိကြားပိုပါဝင်သည်။
အသီးအရွက်များတွင် သင်ခန္ဒါကိုယ်အတွက်လိုအပ်သော အဓိကအားဖြင့် အစာချေစနစ်အတွက်လိုအပ်သော ဗီတာမင်နှင့်မင်နရယ်များစွာပါဝင်သည်။
သင်စားနေချိန်တွင်စိတ်ရှုပ်သွားပါက သင်ပုံမှန်ထက်ပိုစားနေသော်လည်း ဦးနှောက်မှ အစားရက်ရန် သင်္ကေတမပြနိုင်ပေ။
ပန်းကန် ကိုကြီးသောအရာထက် သေးသောအရွယ်အစားကိုသုံးပါ။ ကြီးသောပန်းကန်သုံးမိပါက အစားအသောက်များစွာစားမိပြိး ကယ်လိုရီလဲများနိုင်သည်။
Choose MyPlate10tipstoagreat plate. http://fcs.tamu.edu/files/2015/02/myplate-tip-sheets.pdfAccessed February 17, 2017
HEALTHY 10 TIPS MYPLATE. http://nyc.cce.cornell.edu/healthy-10-tips-myplate/Accessed February 17, 2017
10 Tips: Choose MyPlate. https://www.choosemyplate.gov/content/choosemyplateAccessed February 17, 2017